Ubehlezi emamatheka | Scrolla Izindaba
NgoLwesihlanu sibike ngokubulawa kukaZinhle Kweza, kwividiyo kanye nendaba engaphezulu.
UZinhle wabulawa ezinyangeni ezine ngaphambi kokuthi ahlanganise iminyaka engama-30, kanti ayikho nento encane empilweni yakhe engasinikeza inkomba yokuthi kungani ashone esamncane kangaka.
Esikhundleni salokho indaba ithi ubengumuntu wesifazane othandekayo, othobekile futhi omuhle.
Washesha wayeka isikole wabe esithola isikhundla sokubangumphathi wesitolo iMr Price sase-Mall of Afrika. Ubehlela ukwakha indlu encane yeholidi eduzane nendawo azalelwa kuyo e-Eastern Cape.
Umama wezingane ezimbili zabafana, uZinhle wakhulela kwamamncane wakhe kusukela eneminyaka emithathu ngoba umama kaZinhle wayempofu engakwazi ukumnakekela.
“Ngamthatha ngahlala naye ngoba usisi wami wayengasebenzi futhi engeke ekwazi ukumusa esikoleni esifanele,” kusho uNomawethu oneminyaka engama-52. “UZinhle ubefana nendodakazi yam.”
UZinhle ufunde amabanga akhe aphansi naphezulu kancane e-James Kobe Primary School e-Northcrest, eMthatha. Ubethanda ukumodela futhi wake waphuma isibili emncintiswaneni wonobuhle eskoleni.
Ngokuhamba kwesikhathi wafundisa abanye abafundi abancane ukumodela.
Wathi uma eqala ibanga lesishiyagalolunye, waya ePitoli futhi wafunda e-Target High, esikoleni esizimele i-private school waze wenza ibanga le-12.
Yilapho uZinhle ahlangana khona noThembinkosi Mhlongo, ngenkathi enza ibanga le-11. Ngalesi sikhathi ubeneminyaka engama-22 kanti uThembinkosi ubeneminyaka engama-31.
“Ngiyakhumbula umabhalane weskole wangibiza ngelinye ilanga wangitshela ukuthi kunemoto ethatha uZinhle nsuku zonke,” kukhumbula uNomawethu. “Umabhalane wathi kuzomele aqashwe ngeso ngoba izifundo zakhe seziyantengantenga.
Wafeyila futhi waphinda ibanga le-11.” Ngaphambi kwalokho, uZinhle ubenza kahle esikoleni.
Kodwa manje izinto zashintsha futhi uZinhle waphuma eskolen ngaphambi kokuqeda ibanga le-12.
Waphuma endlini yomndeni ePitoli, futhi uThembinkosi wayebesekhokha irenti e-Sunnyside lapho ayehlala khona nomngani wakhe.
Ngokuhamba kwesikhathi uZinhle wajoyina isitolo sakwa-Mr Price, wasebenza lapho iminyaka eyisikhombisa waze waphelelwa izinsuku zakhe zokuphila.
Ngaleso sikhathi wayengumphathi kwa-Mr Price yegatsha lase-Mall of Africa.
UKatlego Mathadisa wayesebenza naye umufi uthi uZinhle ubengaphezulu kokuba ngumuntu asebenza naye kodwa ubengumngani wakhe. Emsebenzini, ubenguchwepheshe futhi egcina isikhathi, kusho uKatlego. “Besihlezi sihleka njalo futhi sijabulile uma senza imisebenzi yethu”.
UZinhle waphinde wathola ezinye izindlela zokuzenzela imali eceleni. “Ubethanda ukuluka abantu amakhanda futhi ubezitholela imali ngokuluka abantu amakhanda,” kusho uNomawethu.
Umqaphi wakhe oyiphoyisa lesifazane
UZinhle wayenomunye umqaphi, uConstable Patricia Mgijima, lona omubonayo ekugcineni kwevidiyo engaphezulu. UPatricia uthi uZinhle “ubehlezi ehleka futhi ngimthatha njengendodakazi yami”.
Njalo uma uPatricia nomyeni wakhe uBonginkosi bevakashela imndeni yabo eKwaZulu-Natal, uZinhle wayehamba nabo sengathi naye uyilungu lomndeni.
UZinhle wabamema ukuthi bahambe naye ukuyovakasha ekhaya lakhe e-Eastern Cape.
NgoLwesihlanu inkantolo ikuzwile ukuphikisana mayelana nokugwetshwa kukaMhlongo, kanti kusalindwe ukuthi kukhishwe isigwebo.
Inkantolo izizwile izinhloso ezimbalwa eziyimbangela yalokhu kubandakanya nokuthi uMhlongo wayecabanga ukuthi uZinhle wamthakatha, nokuthi amadlozi akhe amutshele ukuthi ashade omunye umuntu wesifazane. UMhlongo oneminyaka engama-40 unezingane eziyisithupha komama abayisithupha abehlukene.
Umamncane kaZinhle owayemthanda kakhulu ubesenkantolo naye NgoLwesihlanu ukuyonikeza ubufakazi boshevu awaziyo othathe impilo kaZinhle. ”
Ngelinye ilanga uThembinkosi waxosha uZinhle nengane yakhe encane uKuhle Kweza endlini phakathi kwamabili ngemuva kokuthi laba bobabili balwe.